Compressed Air ကိုပစ္စည်း China Manufacturers & Suppliers & Factory
Compressed Air ကိုပစ္စည်း - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 21 များအတွက်စုစုပေါင်း Compressed Air ကိုပစ္စည်း ထုတ်ကုန်များ)
စက်ရုံစျေးနှင့်အတူဆေးရုံဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Compressed Air ကိုပစ္စည်း
စက်ရုံစျေးနှင့်အတူဆေးရုံဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Compressed Air ကိုပစ္စည်း ကုန်ပစ္စည်းခြုံငုံသုံးသပ်ချက် 1. ETR ဆေးရုံဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Compressed Air ကိုပစ္စည်းဖျေါပွခကျြ အဆိုပါဆေးဘက် compressed လေကြောင်းပစ္စည်းကိရိယာများလေ Compressor, ယေဘုယျ filter ကို, ပြီးနောက်-အေး, တိကျ filter ကို, ကာလဖြစ်ပါသည်လေကြောင်းလေမှုတ်စက်,...
ဆေးရုံသို့မဟုတ်ဆေးခန်းများအတွက် compressed Air Station
ဆေးရုံသို့မဟုတ်ဆေးခန်းများအတွက် compressed Air Station ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ ၁။ ဖော်ပြချက် compressed air ကို air compressor မှထုတ်လုပ်ပြီး gasco tank ထဲသို့ aftercooler မှတဆင့် ၀ င်သည်။ ထို့နောက် filter group နှင့် adsorption dryer မှတဆင့် compressed air အတွင်းရှိအညစ်အကြေး၊...
ဆေးရုံရေနံ - အခမဲ့ compressed လေကြောင်းဗဟိုဘူတာရုံ
ဆေးရုံရေနံ - အခမဲ့ compressed လေကြောင်းဗဟိုဘူတာရုံ ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ ၁။ ဖော်ပြချက် compressed air ကို air compressor မှထုတ်လုပ်ပြီး gasco tank ထဲသို့ aftercooler မှတဆင့် ၀ င်သည်။ ထို့နောက် filter group နှင့် adsorption dryer မှတဆင့် compressed air အတွင်းရှိအညစ်အကြေး၊...
ရေနံအခမဲ့လက္ကား compressed လေကြောင်းစနစ်
Containerized Air ကိုထုတ်ယူခြင်းယူနစ်ကုန်ကျစရိတ်
Containerized Air ကိုထုတ်ယူခြင်းယူနစ်ကုန်ကျစရိတ် Containerized Air ကိုထုတ်ယူခြင်းယူနစ်ကုန်ကျစရိတ်ဖော်ပြချက်: အောက်စီဂျင်ဆေးဘက်အောက်စီဂျင်လူနာချွေတာဖို့ရန်အလွန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍ, ဆေးရုံအတွက်အထူး, မြေ၌အသက်တာကိုထောကျပံ့တစ်ခုမရှိမဖြစ်ဓာတ်ငွေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ETR Containerized Air ကိုထုတ်ယူခြင်းယူနစ်ကုန်ကျစရိတ်နိုင် 93% ± 3%...
PSA အောက်ဆီဂျင် Generator ကိုပစ္စည်းဈေးနှုန်း PSA အောက်ဆီဂျင် Generator ကိုပစ္စည်းဈေးနှုန်းဖော်ပြချက်: အောက်စီဂျင်ဆေးဘက်အောက်စီဂျင်လူနာချွေတာဖို့ရန်အလွန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍ, ဆေးရုံအတွက်အထူး, မြေ၌အသက်တာကိုထောကျပံ့တစ်ခုမရှိမဖြစ်ဓာတ်ငွေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ETR အမြင့်သန့်ရှင်းစင်ကြယ် Zeolite Molecular ဆန်ခါအောက်ဆီဂျင် Generator...
Air ကိုခှဲယူနစ်စက်ရုံစနစ်ကုန်ကျစရိတ် Air ကိုခှဲယူနစ်စက်ရုံစနစ်ကုန်ကျစရိတ်ဖော်ပြချက်: အောက်စီဂျင်ဆေးဘက်အောက်စီဂျင်လူနာချွေတာဖို့ရန်အလွန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍ, ဆေးရုံအတွက်အထူး, မြေ၌အသက်တာကိုထောကျပံ့တစ်ခုမရှိမဖြစ်ဓာတ်ငွေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ETR Air ကိုခှဲယူနစ်စက်ရုံစနစ်ကုန်ကျစရိတ်နိုင် 93% ± 3% ထုတ်လုပ်ရန်...
စက်ရုံစျေးနှင့်အတူဆေးရုံဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Compressed Air ကို Generator ကို
စက်ရုံစျေးနှင့်အတူဆေးရုံဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Compressed Air ကို Generator ကို ကုန်ပစ္စည်းခြုံငုံသုံးသပ်ချက် 1. ETR ဆေးရုံဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Compressed Air ကို Generator ကိုဖျေါပွခကျြ အဆိုပါဆေးဘက် compressed လေကြောင်းစနစ်လေကြောင်းရန် Compressor, ယေဘုယျ filter ကို, ပြီးနောက်-အေး, တိကျ filter ကို, ကာလဖြစ်ပါသည်လေကြောင်းလေမှုတ်စက်,...
စက်ရုံစျေးနှင့်အတူဆေးရုံဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Compressed Air ကိုဘူတာ ကုန်ပစ္စည်းခြုံငုံသုံးသပ်ချက် 1. ETR ဆေးရုံဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Compressed Air ကိုဘူတာဖျေါပွခကျြ အဆိုပါဆေးဘက် compressed လေကြောင်းစနစ်လေကြောင်းရန် Compressor, ယေဘုယျ filter ကို, ပြီးနောက်-အေး, တိကျ filter ကို, ကာလဖြစ်ပါသည်လေကြောင်းလေမှုတ်စက်, လေကြားခံအကြံပေးအဖွဲ့,...
ဆေးရုံဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Compressed Air ကိုဘူတာ
ဆေးရုံဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Compressed Air ကိုဘူတာ ကုန်ပစ္စည်းခြုံငုံသုံးသပ်ချက် 1. ETR ဆေးရုံဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Compressed Air ကိုဘူတာဖျေါပွခကျြ အဆိုပါဆေးဘက် compressed လေကြောင်းစနစ်လေကြောင်းရန် Compressor, ယေဘုယျ filter ကို, aftercooler, တိကျ filter ကို, ကာလဖြစ်ပါသည်လေကြောင်းလေမှုတ်စက်, လေကြားခံအကြံပေးအဖွဲ့, activated ကာဗွန်...
ရပ်ကွက်အသုံးပြုမှုများအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Compressed Air ကိုစနစ်
ရပ်ကွက်အသုံးပြုမှုများအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Compressed Air ကိုစနစ် ကုန်ပစ္စည်းခြုံငုံသုံးသပ်ချက် 1. ETR ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Compressed Air ကိုစနစ်ဖျေါပွခကျြ အဆိုပါဆေးဘက် compressed လေကြောင်းစနစ်လေကြောင်းရန် Compressor, ယေဘုယျ filter ကို, aftercooler, တိကျ filter ကို, ကာလဖြစ်ပါသည်လေကြောင်းလေမှုတ်စက်, လေကြားခံအကြံပေးအဖွဲ့,...
compressed Air ကိုဗဟိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာဓါတ်ငွေ့ထောက်ပံ့ရေးစနစ်
compressed Air ကိုဗဟိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာဓါတ်ငွေ့ထောက်ပံ့ရေးစနစ် ETR compressed Air ကိုဗဟိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာဓါတ်ငွေ့ထောက်ပံ့ရေးစနစ်ဖျေါပွခကျြ အဆိုပါဆေးဘက်ဆိုင်ရာဗဟိုဓာတ်ငွေ့ပေးဝေရေးစနစ်ကခေတ်သစ်ဆေးရုံများအတွက်သိသာထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဓါတ်ငွေ့သုံးစက်ကိရိယာများကိုသင့်လျော်သောဒီဇိုင်းနှင့် setup...
ဆောင်ရွက်သောဝဘ်ဆိုက် Asu (Air ကို Seperation ယူနစ်) PSA အောက်ဆီဂျင် Generator ကိုစျေး ဆောင်ရွက်သောဝဘ်ဆိုက် Asu (Air ကို Seperation ယူနစ်) PSA အောက်ဆီဂျင် Generator ကိုဖော်ပြချက်: အောက်စီဂျင်ဆေးဘက်အောက်စီဂျင်လူနာချွေတာဖို့ရန်အလွန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍ, ဆေးရုံအတွက်အထူး,...
Compressed Air ကိုပစ္စည်း
compressed Air ကိုပစ္စည်းစက်ရုံ
compressed Air ကိုစက်ရုံ
compressed Air ကိုစနစ်
compressed Air ကိုပစ္စည်းဈေးနှုန်း
compressed Air ကို Facility စျေး
Compressed Air ကိုပစ္စည်း compressed Air ကိုပစ္စည်း compressed Air ကိုပစ္စည်းစက်ရုံ compressed Air ကိုစက်ရုံ compressed Air ကိုစနစ် compressed Air ကိုပစ္စည်းဈေးနှုန်း compressed လေတပ်စခန်း compressed Air ကို Facility စျေး